जमुनाहामा हेल्थ डेस्क भवन निर्माण – sunpani.com
जमुनाहामा हेल्थ डेस्क भवन निर्माण
सुनपानी । ५ श्रावण २०७८, मंगलवार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जको जमूनाह नाकामा स्थायी प्रकृतिको हेल्थ डेस्क निर्माण सम्पन्न भई मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवलशमशेर राणा, उपप्रमुख उमा थापा मगर, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिरालाल रेग्मीले हेल्थ डेस्कको नवननिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभयो ।
कोरोना, डेङ्गु, मलेरिया लगायतका सङ्क्रमक रोगको नियन्त्रणका लागि नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको नगर प्रमुख डा. राणाले बताउनुभयो । देशभरका १३ वटा नाका मध्ये स्थायी प्रकृतिको हेल्थ डेस्क सञ्चालन भएको नेपालगञ्जमा पहिलो पटक हो । नयाँ भवनबाट सेवा दिने हेल्थ डेस्कमा चिकित्सक, ल्याब टेक्निसियन सहितका स्वास्थ्यकर्मीहरु खटिन भएका छन् । भारतबाट फर्किनेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण (स्क्यानिङ) र आवश्यकता अनुसार परीक्षण गरिनेछ ।
५१ लाख ३१ हजार रुपैयाको लागतमा करिब तीन महिनामा प्रिपेफको भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । हेल्थ डेस्कको केही भाग ईलाका प्रहरी कार्यालय जमूनाहले समेत प्रयोग गर्ने उपप्रमुख उमा थापा मगरले जानकारी दिनुभयो ।